Bentley Systems na-etinye obi siri ike na GIS site na ịnweta Agency9 - Geofumadas
Ọktoba, 2018 Geospatial - GIS, innovations, Microstation-Bentley
Site na ebe ahụ site na 2004, mgbe Bentley webatara XFM n'ime mmepe V8i ọhụrụ ya, Bentley nọ na-ejikọta ọrụ ntụpọ nke sitere na ihe nketa Geographics na Bentley Cadastre, PowerMap na BentleyMap. Agbanyeghị, ọ bụ teknụzụ injinia mgbe niile, yana geo na ọkwa dị elu nke CAD nke ndị injinia, ndị nyocha na ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ chọrọ.
Maka ndị anyị ji BentleyMap kemgbe mmalite ya na onye nchịkwa Geospatial, anyị na-ele anya mgbe niile ka enwere ike ịhụ ọkwa ọzọ. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ozi ọma na Bentley Systems enwetala ụlọ ọrụ mepụtara CityPlanner na 3DMaps naanị gosipụtara ikike nke atụmatụ a mụrụ na 2003 na Sweden, site na nsụgharị oge ochie nke nhụsịrị data gbasara data gbasara ntinye na ntinye weebụ na ntinye. mmekorita nke asọmpi dị elu taa; naanị oge mgbe ikike ikuku na-aga nke ọma ma na OpenSource na nkeonwe.
Ugbu a anyị bụ akụkụ nke Bentley, anyị nwere obi ike na ị ga-enweta ike zuru ụwa ọnụ nke ọhụụ nke Agency9. - Håkan Engman, onye isi oche nke Agency9.
Agency9 agbadoro mmejuputa iwu dị mkpa na obodo ndị dị na Nordic, bụ ebe a nabatara ahịrị Microstation nke ọma; M ka nwere ọhụụ na BeAward nke 2004 na Orlando, mgbe Helsinki Cadastre mere ihe ngosi ya na asọmpi na njikwa gburugburu ebe obibi. Ọ bara uru ịghọta na ige ndị ọrụ ntị emetụtalarị anya Bentley na ngwọta a nke etinyere n'ọtụtụ obodo na Sweden, yana ike iwebata data foto foto site na Bentley ContextCapture.
Kedu ngwaahịa ndị Agency9 nwere?
Ikwu okwu banyere ngwa ahia pere mpe, na-eche na ihe ndị a anaghị eme ka enwee ike ịkọwapụta echiche nke teknụzụ, na mgbakwunye na Agency9 jere ha ozi iche iche n'agbanyeghị na ha nọchitere anya otu nchịkọta ahụ anyị chere ugbu a na Bentley ga-agbakọta n'ụzọ ntụgharị n'ime Digital Twin Ọrụ. Iji nye ihe nlele nke a, Agency9 nwere opekata mpe ụzọ anọ nwere ọtụtụ ikike:
Dabere na igwe ojii, ihe ngwọta a lekwasịrị anya na atụmatụ mmekọrịta. Ọ na-enye ohere iji anya nke uche hụ 2D, 3D na data GIS na mpaghara akụkụ atọ. N'ịbụ ndị dị na weebụ, ọ naghị ewe ihe nchọgharị ka ọ rụọ ọrụ, ọbụlagodi n'ọnọdụ okike.
Anwụrụ ọkụ CityPlanner nwere oke iyi dị oke mma, dịka ngosi 3D dị oke oke ọbụlagodi mgbe ị na-eme data buru ibu. N'ihi ya, maka okwu ndị dị ka atụmatụ iji ala eme ihe, o nwere ọtụtụ ihe, ebe ọ nwere ike ịhụ ya abụọ nke jiometrị dị mgbagwoju anya na ọkwa mba / mpaghara, yana ọkwa nke ngwugwu obodo mepere emepe nwere nkọwa atọ.
Na otu n'ime akwụkwọ m nke Akaụntụ Twitter Egosiri m ya dị ka vitaminized Google Earth.
Nke kachasị mma, ikike edezi, inwe ike ibudata CAD, BIM, 3D, ụdị raster ma ọ bụ mkpuchi ọrụ ntanetị. Offọdụ ọrụ na-echetara anyị ihe editọ nke editọ websaịtị OpenStreet Map, yana ọtụtụ ihe ọzọ ma baa uru bara uru -ma ọ bụghị nke ukwuu ma ọ bụ- dị ka a ga - asị na anyị na - egwu CityVille. Enwere ike ịrụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke mere na ndị otu na-arụ ọrụ na njikwa na-achịkwa dabere na ọrụ.
Nke a mejuputara ikike ya na SDK ya, maka owuwu nke ndi 3D, ya na ulo nke ihe onyonyo ogha bu ihe osise: DSM, Smart3DCapture, StreetFactory, PhotoScan, anya 360, onyogho na oru nke OGC.
Nke a bụ ihe ngosi 3D gbasara data gbasara ohere, na-enwe ike ijikọ na ọnọdụ edezi na gburugburu obodo mepere emepe na mpaghara ma ọ bụ na ígwé ojii, n'otu n'otu ma ọ bụ na nza, na ụdị dị ka CityGML, KMZ, Collada ma ọ bụ SQL geometries. Ọ na-abịakarị na 3DCityDatabase dị ka ndabara.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ọ na-enye ohere njikwa ọrụ nke geometries dị mgbagwoju anya na ederede, yana nsụgharị akụkọ ihe mere eme. Ezigbo maka owuwu nke obodo mebere.
Nke a bụ njikwa data, nke na-enye ohere nchịkwa nke isi mmalite dị iche iche ma ọ bụ ọrụ. N'ime ha bụ:
Ihe ngosi elu DSM / DTM: faili GeoTiff, ASCII
Ihe onyonyo edozigharị ma ọ bụ ọdịdị ala: Geo-Tiff / JPG / PNG
Ihe okike dikwa n’elu foto (PhotoMesh): ContextCapture, PhotoScan, SURE, StreetFactory, Rapid3D
Igwe ojii gbara aka: LAS
Geometric topologies: polygons, akara, isi ihe dị ka akara ụkwụ, osisi, arịa ụlọ n'okporo ámá, wdg.
Maka ọrụ, ọ na-akwado:
Ekpuchi na WCS onodu OGC
Maapụ na ọrụ taịlị WMS, TMS, WMTS, Slippy
Ọrụ Nlekọta ESRI
Ihe osise kachasị mma, ihe oyiyi DigitalGlobe ImageService
Site na nnweta a, Bentley nwetara ikike dị ukwuu iji ghọta Digital Twins ya na ọkwa obodo, yana ikike CAD na BIM chọrọ site na omume a na-eme atụmatụ SmartCity zuru oke.
Banyere nnweta nke Agency9
Bentley ekwuputala nnweta, na Nnọchi ihe eji eme ihe n’afọ, ebe ya na Topcon, Siemens na Microsoft na-ekwupụta usoro Pavillion Alliance ma na-akwụghachi ụgwọ ọrụ kachasị mma nke mepụtara na ngalaba nke injinia Geo.
Ntinye ya ozugbo ga-abụ Bentley's ContextCapture, dị ka ọnọdụ dijitalụ iji were anya nke uche hụ akụrụngwa akụrụngwa mepere emepe na-anọchi anya data GIS, usoro ala na BIM, ahaziri na ọrụ igwe ojii ọhụrụ nkewinwin,, nke ewepụtara na ogbako ahụ. Egwuregwu na-akpali mmasị, n'oge ndị dike abụọ ESRI na AutoDesk kwụ n'ahịrị dị ka ndị asọmpi ndị ọzọ na-eme maka gburugburu ebe obibi, yana ịbịaru nsogbu GIS-CAD, na Mbido BIM.
Ọ ga-adị mkpa maka BentleySystems ịme mgbanwe zuru ezu ọ bụghị naanị nke interface ahụ, kamakwa nke i-nlereanya, dịka ọ rụzuru nke ọma na ngwọta ndị ọzọ ọ nwetara. Nke a ga - abụ ihe ịma aka siri ike, ọkachasị na omume anyị na - ahụ; ebe asọmpi GIS na-asọmpi ejirila ọgụgụ ziri ezi nke omume weebụ gụọ akwụkwọ, n'agbanyeghị na enwere ọnọdụ ịga nke ọma na ngwanrọ desktọọpụ, ọnọdụ nke ị nweta nguzozi agaghị adị mfe, tupu onye ọrụ nke na-ele anya ịgbatị usoro iheomume ahụ Ọ na-ewe ịkwaga ma mee ka ihe niile dị mfe na gburugburu weebụ ọhụrụ.
N’aka Bentley, Phil Christensen, onye isi ndị isi ala kwuru, sị:
Ndị ọrụ anyị n'ọtụtụ obodo achọla ikike dị mkpa nke ihe Agency9 emejuputara nke ọma na Sweden niile, iji nweta mmemme mmemme ya n'ezie. N’ezie, mgbe anyị jikọtara ike foto nke Bentley ContextCapture -nke gunyere foto ngwakọ ngwugwo site na ngalaba- Site na teknụzụ anyị Njikọ Data Environment (CDE) maka njikọ geospatial na BIM, ha na-eme Digital Twins obodo nwere ọrụ igwe ojii dị mma.
Eziokwu na 'virtualdịdị' nke CityPlanner na-enye ihe ntanetị zuru oke iji nye ohere ịkọwa ma chekwaa ya n'ụzọ a chịkwara achịkwa.
Ekele sitere na ndị ọrụ Microstation, ndị nwere ike ịtụ anya arụmọrụ geospatial ọhụrụ agbakwunyere na ụlọ ọrụ AECO vetikal ugbu a na-arụ ọrụ na ProjectWise na AssetWise.
Previous Post«Previous Achọpụta na Onye Ọhụụ Injinia ga-enwetara n'aka onye nwe ụlọ
Next Post Ọganihu nke Cadastre Multi-Land maka mmepe mmepe na Latin AmericaNext »